Ny didim-pitondrana dia ny fampiharana ireo fepetra ankampoben’ny amin’ny hamehana ara-pahasalamana. Misy ireo toerana anaty fihibohana: Analamanga, Toamasina I sy II, ary ny faritra Matsiatra Ambony. Tsy misy mihitsy ny fiara mitatitra olona afaka mivezivezy afatsy izay nahazo fahazoan-dàlana manokana avy amin’ny CCO Covid-19 any amin’ireo toerana. Tsy misy afaka mivezivezy ny olona, tena tsy azo atao. Fiarovana ny ainao io, ary raha miantsena dia olona iray ihany amin’ny 6ora maraina-12ora atoandro ary olona iray ihany, araka ny didim-panjakana. Mila fifanomezan-tànana. Ny fepetra iraisana dia misy ny manokana ary misy ny iraisana. Iraisan’ny Nosy ny hamehana ara-pahasalamana. Manerana ny Nosy rehefa toerana rehetra manangonangona olona tsy misy mahazo misokatra (Bar, Restaurant, fetifety, famoriam-bahoaka, fampianarana,…) ankoatra ireo entana ilaina amin’ny andavanandro. Ho an’ny sampan-draharaham-panjakana ihany koa dia mikatona ankoatra ny tena ilaina: fahasalamam-bahoaka, filaminana, vola sy ny tetibola,… Mila manaja ny fepetra ihany koa. Ny mpivarotra rehetra dia misy ny fanararaotana. Manaraha ny lalàna mba tsy hifanomezan-tsiny. Hidina ifotony ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny varotra sy ny hetra, eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo olona tsy mihiboka. Aoka tsy hifanome tsiny dieny izao sao sanatria tratra eny an-dàlana eny. Io tsy misy hoe fangatahana fa ny ainao no harovana. Io tsy misy hoe fangatahana, tsy misy handeha hifampitampitamby sy hifampisangisangy, hoy io Minisitra io. Na ianao mahita ny firenena tsy misy olona maty, na te hijery tahaka ny any ivelany sanatria hoe hanisa faty isan’andro. Na ho velona na ho faty fa tsy misy safidy hafa io. Sanatria toa misy keremesy any amin’ny fokontany samihafa, ka nanome toromarika ny tompon’andraikitra eny ifotony hifehy ny vahoaka ny minisitry ny atitany, tsy tokony hiandry mpitandro filaminana ianareo mpitantana ny fokontany fa tonga dia raiso ny andraikitra, hoy izy. Tena hisy ny fanaraha-maso, ka mifampilaza sy mifampiteny aloha mba tsy hifanome tsiny rehefa mampihantra ny lalàna avy eo, hoy i Tianarivelo Razafimahefa. Asa na hanova zavatra io fanentanana sy fampitandremana io, fa saika tsy manaja fihibohana aloha ny ankamaroan’ny olona.